Calypsol (ကလစ်ပ်စိုးလ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Calypsol (ကလစ်ပ်စိုးလ်)
Calypsol (ကလစ်ပ်စိုးလ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Calypsol (ကလစ်ပ်စိုးလ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Calypsol (ကလစ်ပ်စိုးလ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
calypsol က ိုခွဲစိတ်မှု နှင့် ကြွက်သားများ ပြေလျော့ရန်မလိုသည့် လုပ်ဆောင်မှုများတွင် အသိအာရုံနှင့် ထိတွေ့မှုကို ပျောက်သွားစေရန်သုံးသော မေ့ဆေး အဖြစ် အသုံးပြုကြပါသည်။
Calypsol (ကလစ်ပ်စိုးလ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Calypsol သည် ထိုးဆေးဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ဆေးခန်းနှင့် ဆေးရုံများတွင်ဆရာဝန်များက အသက်ရှုလမ်းကြောင်းနှင့် လေလမ်းကြောင်းပွင့်နေစေရန် ထားပြီး မေ့ဆေးပေးရာတွင် အသုံးပြုကြပါသည်။
Calypsol (ကလစ်ပ်စိုးလ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Calypsol ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Calypsol ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Calypsol
ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Calypsol ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Calypsol ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Calypsol (ကလစ်ပ်စိုးလ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင်သည် အရက်စွဲနေလျှင် သို့မဟုတ် အရက်အလွနါအကျွံသောက်ခြင်းကြောင့် ဆိုးကျိုးများဖြစ်ဖူးလျှင်
ဆေးကုသမှု၊ သွားနှင့် ပက်သက်သောကုသမှု၊ အရေးပေါ်ကုသမှုနှင့် ခွဲစိတ်မှုများမလုပ်မီ calypso သောက်ထားလျှင်
Calypsol ထဲတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
Calypsol သည် ၂၄ နာရီ ခန့်အထိ မူးဝေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အရက်နှင့် အချို့သောဆေးများသည် Calypsol ၏အာနိသင်ကို ပိုရှည်ကြာစေသည်။ ထို့ကြောင့် ခွဲစိတ်ြင်္ပီး ၂၄ နာရီ အတွင်းတွင် ကားမောင်းခြင်း နှင့် အရေ.ကြီးသော အလုပ်များလုပ်ဆောင်ခြင်းကို မပြုလုပ်ပါနှင့်။
Calypsol သည် ၂၄ နာရီ ခန့်အထိ အမူအရာများပြောင်းလဲခြင်း၊ စိတ်ခံစားမှုများပြောင်းလဲခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ စိတ်အာရုံရှုတ်ထွေးခြင်း ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ သိလိုသည်များရှိသေးသော် ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ အသက်ကြီးသူများ တွင် ဆေးအာနိသင်များပို ပြင်းနိုင်သည့် အတွက် သတိနှင့် အသုံးပြုရမည်။
အသက် ၁၆ နှစ်အောက်ကလေးများတွင် Calypsol ၏ စိတ်ချရမှုနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို တိကျစွာဖော်ပြထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် ဆေးမသောက်မီ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ရန်လိုအပ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Calypsol (ကလစ်ပ်စိုးလ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Calypsol (ကလစ်ပ်စိုးလ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဆေးတိုင်းသည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ခံစားရနိုငသော်လည်းလူတဦးနှင့်တဦးအပေါ်မူတည်ပြီး မတူညီပါ။ အောက်ပါတို့သည် ဖြစ်လေ့ရှိသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပြီး ထိုလက္ခဏာများ ခံစားရပါက ဆရာဝန်နှင့် ပြသပါ။
ဆီးသွားရခက်ခြင်း၊ ဆီးခဏခဏသွားခြင်း၊ ဆီးသွားလျှင် နာကျင်ခြင်း
ပုံရိပ် ၂ ထပ်မြင်ခြင်း
ကြွက်သားများ မူမမှန် လှုပ်ရှားမှုများ ဖြစ်ခြင်း
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်ခံစားမှုများ ပြောင်းလဲခြင်း
ဆေးထိုးထားသော နေရာတွင် နာကျင်ခြင်း၊ နီရဲခြင်း၊ ယောင်ယမ်းခြင်း
အဆက်မပြတ် ခေါင်းမူးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း
မျက်လုံးအိမ်တွင် မူမမှန်သော လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Calypsol (ကလစ်ပ်စိုးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Calypsol ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အောက်ပါဆေးများသည် Calypsol နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သော ဆေးများဖြစ်ပါသည်။
Carbinoxamine(Karbinal ER, Arbinoxa, Palgic, and many others)
Topical cocaine or cocaine applied to the nose
Opioids, such as alfentanil,codeine, hydromorphone (Dilaudid), and oxymorphone (Opana)
Tramadol(Conzip, Ultram, Ultram ER, Ultracet)
Barbiturateslike butalbital,butabarbital(Butisol), andpentobarbital
Benzodiazepines, such as like alprazolam (Xanax),clonazepam(Klonopin), and lorazepam(Ativan)
Carbamazepine (Carbatrol, Equetro,Tegretol), oxcarbazepine (Trileptal), phenytoin (Dilantin)
Zaleplon(Sonata, Starnoc, Andanta) or zolpidem (Ambien)
Rifampin(Rifadin, Rifamate, Rimactane)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Calypsol (ကလစ်ပ်စိုးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Calypsol က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Calypsol (ကလစ်ပ်စိုးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Calypsol ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အောက်ပါတို့ရှိလျှင် အသိပေးရမည်။
ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖူးလျှင်၊ သွေးထွက်ဖူးလျှင်
ဆီး နှင့် ဆီးအိမ် ရောဂါများ
စိတ်ရောဂါ၊ စိတ်ခံစားမှုများ မူမမှန်ခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Calypsol (ကလစ်ပ်စိုးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
1-4.5 mg/kg သို့မဟုတ် 1-2 mg/kg(0.5mg/kg/min)
(ခွဲစိတ်စဉ် ထုံးဆေးအနေနှင့် ၅-၁၀ မိနစ်ကြာမျှ ထုံနေစေရန် အသုံးပြုရမည့် ပမာဏ မှာ2 mg/ kg ဖြစ်ပြီး ဆေးအာနိသင်ကို မိနစ် ၃၀ အတွင်းရရှိသည်။)
ထို့နောက် လူနာအပေါ်မူတည်ပြီး လိုအပ်သလို ဆေးထပ်ပေးနိုင်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ပမာဏ ၏ တဝက် သို့မဟုတ် တူညီသော ပမာဏ ကို ထပ်ပေးနိုင်သည်။
(ခွဲစိတ်စဉ် ထုံးဆေးအနေနှင့် ၁၂-၂၅ မိနစ်ကြာမျှ ထုံနေစေရန် အသုံးပြုရမည့် ပမာဏ မှာ9-13mg/ kg ဖြစ်သည်။)
ကလေးတွေအတွက် Calypsol (ကလစ်ပ်စိုးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၁၆ နှစ် ကလေးများအတွက်
Calypsol (ကလစ်ပ်စိုးလ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Calypsol ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
၅၀၀ မီလီဂရမ် ထိုးဆေးရည်
Calypsol ကို လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Calypsol. https://www.drugs.com/cdi/ketamine.html. Accessed November 5, 2016
Calypsol. http://www.everydayhealth.com/drugs/ketamine. Accessed November 5, 2016
Calypsol. http://pharmacy-now.com/calypsol-500-mg-10-ml. Accessed November 5, 2016